HAMRAKHABAR | » हातखुट्टा घिसार्दै जीन्दगी लतार्ने शारदाको संघर्ष : कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ? हातखुट्टा घिसार्दै जीन्दगी लतार्ने शारदाको संघर्ष : कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ? – HAMRAKHABAR
आज भन्दा ७ बर्ष अगाडि ! तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रुकुमको प्राङ्गणमा केटीहरुको भिडभाडको बिचमा देखिएको एउटा विचित्रको दृश्यले मेरो ध्यान तान्यो । दुबै हात जमिनमा टेकेर पुरै शरीर लतार्दै, घिर्सिदै हिड्ने मानिसको त्यो अवस्थाले मेरो मात्र हैन धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो ।
असह्य शारिरीक पीडा बोकेर शरीरलाई ढुंगा र माटोमा लतार्ने भविष्यका सूनौला सपना बोकेर जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट आएकी थिईन,उनी अर्थात २६ बर्षीया शारदा शर्मा । करिब ४० किलोमिटर जंगल र भिरको बाटो खुट्टाका घुँडा र हातका पन्जाले थिचोल्दै जिल्ला विकास समिति रुकुममा आईपुगेकि थिईन उनी । त्यतिबेला जिविसमा महिलाहरूको लागि निःशुल्क खरीदार पदको टिउसन पढ्नेहरुको लागि प्रवेश परिक्षा हुदै थियो । त्यसैमा सहभागी हुन अशक्त शरिर घिसार्दै अत्यन्तै कष्टका साथ निकै टाढा रहेको पश्चिम खोलागाउँवाट मुसिकोट खंलगा पुगेकि रहेछिन शारदा ।
हात खुट्टा जमिनमा घिसार्दै जिन्दगीमा सरकारी सेवा गर्ने लगायतका अरु थुप्रै जीन्दगीका सपनाहरु लिएर संघर्ष गरिरहेकी उनका लोभलाग्दो रहरहरु सुनाईन । कति हो कति पीडा मनमा थिए होलान, दुबै खुट्टाले काम गदैनन् । उनि जन्मजात अपांग हुन । तर पनि अदम्य शाहसका साथ उनले गरेका संर्घषहरु कयौँ युवाहरुका लागि प्रेरणादायी थिए ।जन्मजात दुवै खुट्टा नचलेपछि शारदालाई हिडन नमिल्दो रहेछ । दुई हातमा चप्पल लगाएर हात खुट्टा टेक्दै दुई दिन लगाएर भविस्यको खोजी गदै कहिले सदरमुकाम र कहिले घर, कहिले गाविस कार्यालय ! लोकसेवाको परीक्षाका लागि कहिले दाङ कहिले काठमाडौ । शारिरीक समस्यासंगै उनलाई आर्थिक समस्याले पनि उत्तिकैै सताएको थियोे । गरिब परिवारमा हुर्केकी शारदाको घरमा बुवा पनि शारदा जस्तै अपागं हुनुहुन्थ्यो ।
दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न सधै जसो समस्या नै थियो । गरिव परिवार भित्रको शारारिक समस्याले परिवारमा नै निकै ठुलो तनाब ।शारदाका कैयौ सपनाहरु ति गरिवीका हावा हुरीले पटक पटक उडाई दिएका छन । सपना भित्रका पीडाहरुमा सामाजिक रुपमा गरिने कतिपय ब्यबहारले दुखेका मनहरु उनले जीन्दगीमा भोगेका कठिन चुनौतिहरु हुन ।यसरी हात र खुट्टाको सहायतामा बामे सरेर धेरै हिड्दा शारदालाई शारीरिक रुपमा निकै समस्या हुन्थ्यो । दिनभरीको शारारिक घिसाईले रातभरी जीउ दुखेर सुत्न समेत कठिन थियो । शारारिक हिसावले उनी ह्विलचियरमा हिड्नु पर्ने हो । तर भौगोलिक विकटता र आर्थिक अभावले संभव भैदिएन ।
वर्षभरीको झरी र हिउद भरीको चिसो सिरेठोेले शारदालाई निकै पिडा हुन्थ्यो । पानीको झरीमा ओत लाग्ने अवस्था नै हुदैन्थ्यो । वर्षामा पानीले रुझाएर समस्या, हिउद लागेपछि पहाडको जाडोले सताउथ्यो । साधारण कपडा किन्न समेत पैसा नहुने शारदाका लागि न्यानो कपडा त चाहाना मात्र हुन्थ्यो । बजारभरी बेच्न राखिएका न्यानो कपडा हेरेरै चित्त बुझाउनु वाहेक अरु कुनै विकल्प नै थिएन शारदाका लागि ।
जागिरको लागि पाएका दुख, यो विचमा दैनिकी चलाउन भएको चरम आर्थिक संकट, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा घिस्रिनु पर्ने शारारिक बाध्यताहरुका अनेकौ उनका पीडाहरु त छदै थिए, त्यसमा पनि घरमा बुवाको निधन भए पछि उनीमा झन पीडाका घटनाहरु थपिएका छन ।
शारदा जस्तै गरिबी, अभाव र शारीरिक समस्या भोगिरहेका उनका वुवाले छोरी शारदाको सपना पुरा भएको देख्न पाउनु भएन । गरिविसंगै शारीरिक पीडा भोगिरहेकी उनलाई यतिवेला पारिवारिक अवस्थाले समेत चुनौति थपिदिएको छ । एउटा वावुको अभिभावकत्व गुमाएकि छन् उनले ।
संकटका आधी हुरी निरन्तर आईरहेपनि संघर्षको यात्रा सकिएको छैन । पीडाका आधिबेरीले बारम्वार उनका खुसिहरुलाई ढाकिदिएका छन् । पारिवारिक विछोडसंगै वषौ देखि भोग्दै आएको गरिवी, अभाव र शारीरिक समस्या नजिकै बसेर सुनेर उनलाई साहस र थप हौसला थपिदिने मेरो चाहना अहिलेको लकडाउनले सम्भव हुन दिएको छैन । शारदासँग भेट्न र संकटमा केहि सहयोग गर्ने मेरो योजना पनि यो लगडाउन चुनौति बनेको छ । पीडाको पहाड बोकेर बाँचेकि उनको यो ब्यधा र बाध्यता सुनिदिने र बुझिदिने मनहरुले उनलाई केहि त सहयोग गर्न सकौला नि ?
उ बेला मौवाको रक्सी औषधि नै हुन्थ्यो